Hub iyo Gaadiid dagaal oo kasoo degay Garoonka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Hub iyo Gaadiid dagaal oo kasoo degay Garoonka Muqdisho
Hubka waxa uu ka yimid Turkiga, wuxuuna ku socdaa Ciidanka Gorgor oo Farmajao uu doonayo inuu dalka ku qabsado.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Maanta si qarsoodi ah Garoonka diyaaradaha Muqdisho looga soo dejiyay hub iyo gaadiid dagaal oo diyaarado lagu keenay xili uu Shir ka furmay xarunta Afisyooni kaasoo ka qeygalkiisa ay qaadaceen Deni iyo Axmed Madoobe.
Warar hoose oo KON ay heshay ayaa sheegaya in hubka iyo saanada Ciidan laga keenay dalka Turkiga, waxaana loo wadey guutada Gorgor ee Farmaajo u diyaarsaday inuu dalka ku afgembiyo, isagoo dhawaan la wareegay Gedo.
Waxaa Turkiga uu sidoo kale tababaray Haramcad oo katirsan booliska, kuwaasoo Muqdisho kawado dhibaatooyin kala duwan, iyagoo loo adeegsado weerarada Musharixiinta mucaaradka iyo dadka ka feker duwan Farmaajo ee ku sugan magaaladda Muqdisho.
Garoonka Muqdisho waxaa buux dhaafay maalmihii ugu dambeeyay Ciidamo ay la yimaadeen Deni iyo Axmed Madoobe, kuwaasoo laga cabsi qabo inay isku dhaceen Ciidanka Haramcad ee halkaas la geeyay oo talis ahaan la hoos geeyay Saadaq Joon.
Deni oo wareysi siiyay BBC shalay ayaa ka digay Ciidanka sida gaarka u isticmaalayo Farmaajo khatarta ka imaan karta, maadaama dalka uu hubeysan yahay, oo cidna lagu duuli karin.